यौ न सम्बन्धले तनाव कम गर्छ, दम्पतीमा सुख ल्याउँछ ! – दैनिक नेपाल न्युज
यौ न सम्बन्धले तनाव कम गर्छ, दम्पतीमा सुख ल्याउँछ !
धेरै मानिस समस्या महसुस गर्छन्, तर सामाधानको प्रयास गर्दैनन्। प्रयास सुरु गर्नु समस्याबाट बाहिर आउने पहिलो पाइला हो। सर्वप्रथम तपाईंले आफ्नो घरझगडाका स्रोतहरू के-के हुन सक्छन् भनेर गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ। थुप्रै कारणले घरमा झैझगडा हुन्छ। दम्पतीबीच पनि बेलाबखत झगडा हुन्छ। झगडा तत्काल व्यवस्थापन भएको छ कि त्यसले निकै गम्भीर रूप लिइसकेको छ ? दम्पतीबीच हुने झगडाका यस्ता पाटाहरू केलाउनु आवश्यक छ। झगडा जीवनको यस्तो नकारात्मक पाटो हो जसले मानिसलाई ठूला-ठूला दुर्घटनासम्म धकेल्छ।
झगडा वा बेमेलका विषयहरूले दम्पतीलाई त अझ नराम्रो असर पारेको हुन्छ। यसले मानसिक अवस्थामा असर पार्छ। मनस्थितिमा असन्तुलन आउनासाथ शरीरले असजिलो महसुस गरिहाल्छ। नकारात्मक ग्रन्थिहरू सक्रिय हुन्छन्। शरीरले त्यही किसिमको केमिकल्स उत्पादन गर्न थाल्छ। हँसमुख रहँदा शरीरले दिने प्रतिक्रिया फरक भैहाल्छ। जहाँसम्म यसले दम्पतीको यौन गतिविधिमा पार्ने नकारात्मक प्रभावको कुरा छ, मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्नासाथ त्यसको समग्र शरीरमा नकारात्मक असर पर्छ। दम्पतीको मुडमा नकारात्मक असर पर्छ। यौनसम्पर्कका लागि बन्नुपर्ने वातावरण, परिवेश बन्न सक्दैन। एक-अर्काबीच मायामोहको स्थिति रहँदैन। आपसी माया सञ्चारको वातावरण बन्दैन। यसले गर्दा झगडाको स्थितिमा रहने जोडीका यौनिक सम्बन्ध त्यति राम्रो हुँदैन। शारीरिक बनावट एवं मनोवैज्ञानिक असरका कारण दम्पतीको सम्बन्धमा प्रतिकूल असर परेको हुन्छ।
दम्पतीबीचको यौनसम्बन्धले तनाव कम गर्छ। यस्ता भनाइहरू विभिन्न संस्कृतिमा विद्यमान छन्। यस्तो अवस्थामा तनाव बढी भएको भन्ने विषयलाई आधार मानेर विभिन्न चलचित्र पनि बनेका छन्। यसरी यौनसम्बन्धले दम्पतीको जीवनमा भएको तनाव कम गर्छ कि गर्दैन भनेर अनुसन्धानहरू पनि भएका छन्। यौन क्रियाकलापले श्वासप्रश्वास, रक्तसञ्चार, नशा प्रणाली आदिलाई आनन्द महसुस गराउँछ भन्ने विषयमा युनिभर्सिटी अफ सिफिल्डका रोय जे लेभिनले अनुसन्धान गरेका छन्। अनुसन्धानहरूले देखाएअनुसार पुरुषको वीर्यमा पाइने हार्मोनले महिलालाई आनन्दको अनुभूति गराउँछ। त्यसैले कतिपय महिलाले यौन क्रियाकलापपछि मुड परिवर्तन भएको महसुस गर्छन्।
अर्को अनुसन्धानले नियमित स्वस्थ यौनसम्बन्धले तनाव सामना गर्ने सीप बढ्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। विभिन्न किसिमका अनुसन्धानअनुसार यौनसम्पर्कले तनाव कम गर्न मद्दत गर्छ। त्यसैले तपाइर्ंले सर्वप्रथम त झगडाको स्रोत खोजेर त्यसको समाधानतर्फ लाग्नुपर्छ। श्रीमान्को अर्को सम्बन्ध स्थापित भएर पनि यौनसम्बन्धमा दरार पैदा भएको हुनसक्छ, तर यति मात्र कारणले तपाईंहरूको यौनसम्बन्धमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको नहुन सक्छ। त्यसपछि श्रीमान्सँग सोध्नुहोस्- किन हाम्रो सम्बन्ध मनमोहक हुन सकिरहेको छैन ? आपसमा माया बाँड्नुहोस्।
रमाइला एवं मनमोहक स्थानहरूको भ्रमण गर्नुहोस, यौनसम्बन्धी आनन्द र सन्तुष्टिका बारेमा पनि चर्चा गर्नुहोस्। यौनसम्बन्धलाई कसरी आनन्ददायक बनाउन सकिन्छ भनेर आ-आफ्नो मन बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। यसले स्थितिमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। यौनसम्बन्ध बिग्रिएका कारण निकै तनावको स्थितिमा हुनुहुन्छ भने मनोविद्हरूसँग पनि परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ।
नेपालमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमित सङ्ख्या ४८ पुग्यो